Dalka Kenya oo marti galin doona baankii sadexaad ee ku shaqeeya shareecada Islaamka - Horn Future
Dalka Kenya oo marti galin doona baankii sadexaad ee ku shaqeeya shareecada Islaamka
Nairobi -(Reuters)-Baanka dhexe ee dalka Kenya ayaa waxa uu soo saaray oggollaansho uu siiyay baanka( Dubai Islamic Bank) kadib markii uu joojiyay oggollaanshaha baanan cusub sanadkii 2015.
Waxa baanka dhexe ee Kenya uu sheegay go’aankan uu ku dhawaaqay Jimcihii in uu ka dhigayo (Dubai Islamic Bank- Kenya), baankii saddexaad ee Kenya ee si buuxda u waafaqsan shareecada ee laga furo dalka.
Waxa lagu sheegay warkan qoraalka ah in (Dubai Islamic Bank -Kenya, )”uu si gaar ah bixin doono dhammaan adeegyada baananka ee la socon kara Shareecada (Islaamka) dalka Kenya,iyada oo marka la bilaabo uu kusoo kordhin doono suuqa faa’iidooyin.
Waxa warkan qoraalka ah uu intaa ku daray in “soo galitaanka baankan ee Kenya ay ku salaysan tahay istaraatijiyada Kenya ee mudaanta siinaysa in la xoojiyo joogitaanka caalamiga ah,”.
Baankan ayaa waxa iska leh “Dubai Islaamic Bank”, kaas oo sidoo kale ku leh saamiyo baananka Pakistan, Sudan, Urdun, Bosnia iyo Indonesia.
Waxa dalka Kenya kuyaala 2 baanan oo Islaami ah oo kale kuwaas oo kala ah Gulf African Bank iyo Community First Bank.
Baanka dhexe ee Kenya ayaa isagu aanan sheegin sababaha uu u joojiyay bixinta oggollaanshaha cusub ee baananka sanadkii 2015.
« Danmarka:Britain waxay si xoog leh isku gu dayaysaa inay kala jajabiso Midowga Yurub	» Turkey: Wikipedia blocked for disregarding the law